Mampikaika ny tsolotra sy kolikoly eto an-tanàna
Loza efatra. Izany no nanjo ity fianakaviana iray iaharan'ny sotasotan'ny olona ambony grady, manan-kaja. Sendra ny atody miady amam-bato ity fianakaviana ity satria rava ny fananana, maizina ny ho avy ary vao notanana am-ponja vonjimaika ny zanaka faravavy. Tantara tsy azo lazaina ho tantaram-pitiavana akory no niantombohan'ny zava-drehetra kanefa ny pitik'afo nivoaka avy tao no nandoro ny lamban'ny rehetra.
Tale tamina orinasa iray no nitory fitia tamin'i Val. Nilaza ity farany fa efa maty vady. May ny endim-boanjon-dravehivavy naheno ny momba ity lehilahy izay tsy fanta-pototra akory ka niroso tamin'ny lalina teo amin'ny fiarahana. Afaka sivy volana, tratra ny nafenina. Teo vao zendana rakalakely naheno fa hay manam-bady ara-dalàna ity lehilahy. Niala avy hatrany ny tenany saingy notsenain'ingahy tale tamin'ny fandrahonana hoe "Na ianao matiko, na ianao migadra". Nanomboka nikopak'elatra sy nanorina finanana vaovao i Val fa tsy nety ho tafavoaka mihitsy satria sembanin'ingahy tale avokoa izay rehetra ataony. Vatran'ity farany ny manakarama olona hamotehana ny fiainany ka nanefa tamin'izany ny trano filanonana sy ny fiara fampiasa an-davan'andro. Very fanahy mbola velona i Val satria tsy hitany izay hatao sy hosarangotina kanefa mafy koa ny adidy miandry azy amin'ny famelomana ireo ray aman-dreniny. Tsy nanampo ny hovoasaringotra tanaty tantara ratsy i Val satria notorian'ingany tale ho nivadi-pitokisana ravehivavy ka rehefa tratry ny tsindry dia voasazy handoa onitra maherin'ny Ar 12 tapitrisa.
Nandeha teny ny andro sy ny volana ary nivadika ho taona. Niverina indray ny tsy nampoizina. Tafiditra tanaty vela-pandrika ny zandrin'i Val ary tsy namelan'ingahy tale raha tsy izao mhinana kely any an-tranomaizina izao. Nomeny taratasim-bola hangalana Ar 3 tapitrisa i Maya ary nolazainy fa fanomezana io ary tsy averina. Rehefa azo ny vola dia Ar 1 tapitrisa no natolony ity zazavavy ary mbola nosesefany ihany koa hangalatra ny taratasy fifanekem-pivarotana ny fiaran-jokiny. Taty aoriana dia tsy afa-bela intsony fa mbola tratry ny fivadiam-pitokisana ihany koa. Ilay Ar 1 tapitrisa izay nolazaina fa fanomezana dia tafakatra hatrany amin'ny Ar 7 tapitrisa. Niaka-nidina teny amin'ny faritany sy teny amin'ny borigadin'ny polisy misahana ny heloka be vava izy mirahavavy. Tohana ary kivy tanteraka i Val manoloana ny tranga mahazo azy satria tsy mba manam-bola omena ny polisy ny mpitsara toa an'ingahy tale, izay sady mahavita porofo sandoka sy manarama vavolombelona mandainga handetehana azy mirahavavy. Ory anaty i Val mandinika ny toe-draharaha satria araka ny nambarany dia tsy mahalala na inona na inona ireo ray aman-dreny efa zokiolona. Hany heriny dia ny miady irery, manao izay ho afaka amin'ny fanampiana ny zandriny. Sarotra ho azy ny hihoatra ireo olon'ny lalàna izay votambitamby vola an-tapitrisa ka tsy maharitra ny mena miraviravy. Mitazam-posiny ihany koa ny BIANCO fa tsy mandray ny andraikitra tandrify azy. Aiza no aleha? Iza no hitarainana? Tsapa fa hay ambonin'ny lalàna avokoa ireo mpampihatra izany ka miandry izay rariny hiasa sisa.
Nangonin'i Farah R.